केशबराज जोशी/ समाचार टिप्पणी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुईवटा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता दर्ता गरायो । मंगलबार अबेर दर्ता गराइएको प्रस्तावमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गरिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नंम्बरमा गाभ्ने गरी संशोधन प्रस्ताव भएदर्ता भएसँगै मुलुकमा एकपटक फेरी राजनीतिक संकट चुलिएको छ । तर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसंगै जारी आन्दोलनले मुलुक अर्को…विस्तृत समाचार »
९ मङ्सिर २०७३
९ मंसिर,काठमाडौँ । पिएन ओझा नेपालको पर्यटकीय सुचिमा पर्ने मध्येको एक हो एकदमै रमणिय र मनमोहक स्थानमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज । नेपालको सुदुरमा पर्ने यस निकुञ्जमा विभिन्न प्रकारका जडिवुटि पाउनुका साथै, अनेक प्रजातिका पशुपंक्षिहरु पनि भेटाउन सकिन्छ । राजधानीबाट टाढा रहेकोले पनि पर्यटकहरुको यो ठाउँमा आँखा नपुगेको तितो यथार्थ रहेको विश्लेष्कहरुको बुझाई छ । यो निकुञ्ज अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटीको विचमा रहेको छ ।…विस्तृत समाचार »
९मंसिर,काठमाण्डौँ । प्रिय सुमन खरेल सर, नमस्कार । खै किन किन आज तपाइसंग गुनासो पोख्न मन लाग्यो त्यसैले पत्र मार्फत गुनासो पोख्दै छु । गुनासो यसकारण पोखिरहेको छु की तपाई पेशाले पत्रकार त्यस्तै म पनि पेशाले पत्रकार नै हुँ । फरक यति हो तपाई अग्रज पत्रकार म भर्खरै पत्रकारिता पेशामा पाइला टेकेको मान्छे । आपm्नो जिवनको झण्डै दुइ दशक भन्दा बढी तपाइले पत्रकारितामा बिताइसक्नुभयो…विस्तृत समाचार »
​कसरी आयो लोकमान माथि महाअभियोगका प्रस्ताव ? प्रस्तावक शाहीका अनुभव
३ मंसिर । नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा एउटा अप्रत्यासित घटना घट्यो, त्यो पनि यूद्ध स्तरमा । वि.सं २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म नेपाली जनताले नजिकबाट हतियार सहितका युद्धका खबरहरु सुनिरहन्थे । कहिले जिल्ला सदरमुकाम कब्जा त, कहिले आर्मी व्यारेकमाथि हमला । सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादी छापामारहरुले रातारात जिल्ला सदरमुकाममा हमला गर्थे र उज्यालो नहुँदै आफ्नो इलाकातिर फर्किहाल्थे । भोलिपल्टदेखि त्यसको प्रभावले सिंहदरवार देखी देशैभरि तरंग याउँथ्यो ।…विस्तृत समाचार »
६ कार्तिक २०७३
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्य किरण निकै चर्चित नाम हो । उनीसँगै काम गरेका र दीक्षित भएका नेताहरू अहिले विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा छन् । पछिल्लो समय मोहनविक्रम र मोहन वैद्यलाई उनका आफ्नै सहयात्रीहरूले छाड्दै गएका छन् । कम्युनिस्ट दर्शनका व्याख्याता भए पनि सिंह र वैद्यबीच अहिले हार्दिक सम्बन्ध छैन । एक दशक एउटै पार्टी कमिटीमा रहेर काम गरेका सिंह र वैद्यबीच…विस्तृत समाचार »
एलिजा,उप्रेती । देशमा राजनीतिक अस्थिरता ,कमजोर सुशासनकै कारण अवसरबाट बञ्चित कैयौ यूवाहरु विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन । मुलुकमा दिनप्रतिदिन बेरोजगारी संख्या बढेसँगै काम र अवसरको खोजीमा विदेशिनेक्रम बढ्दै गयो । २०७२/७३ सम्ममा रोजगारीको लागि मुलुक छाडेर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ । यसैको परिणाम स्वरुप आ.व. २०५०/५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु. २ अर्ब १५ करोड रहेकोमा आ.व.…विस्तृत समाचार »
दिल्लीमा दिल खोलेका प्रचण्डको भ्रमण न उपलब्धिमुलक न विवादित
एलिजा उप्रेती /टिप्पणी कुनैबेला विस्तारवादी भारतसँग सुरुङयूद्ध लड्ने रटान लगाउने उनै प्रचण्ड यतिबेला भारतको चारदिने राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका छन् । उनको यो भ्रमण हेर्दा लाग्छ उनले आफैले खनेको सुरुङ पुरिसकेका छन अर्थात जस्ताको तस्तै छ दिल्ली र प्रचण्डको सम्बन्ध विचमा कुनै दरार आएकै छैन । अझ भनौ भारतसँग उनको दुस्मनी कहिल्यै थिएन । तर सुरुङयूद्धमा पुगेका उनै प्रचण्डको दिल्लीसँगको सामिप्यता कसरी भयो त ?…विस्तृत समाचार »
हरेक देशको शान राष्ट्रिय झण्डा यसरी शुरु भयो
गगन अर्याल १७ भदौ । कुनै पनि देशको राष्टिय झण्डा देशको शान र मान हो , झण्डाकै लागि ठुला–ठुला युद्ध भएका छन । विश्वमा झण्डाको शुरुवात सेनाले गरेको विश्वास गरीदै आएको छ । यद्यपी त्यसबारे कुनै ठोस प्रमाण भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन । लडाइँको मैदानमा आफ्ना सैनिकलाई एकत्रित गर्न निश्चित ठाउँमा रंगीन कपडा फहराइन्थ्यो । यस्तो कपडा देखेपछि टाढा–टाढा रहेका सैनिकहरु पनि एकै ठाउँमा भेला…विस्तृत समाचार »
काठमाण्डौं । चाणक्य वा कौटिल्यको नामले चिनिने महान विद्धान, आचार्य , दार्शनिक एवं महान सम्राट चन्द्र गुप्त मौर्यका विशेष सल्लाहकार थिए । उनको जन्म लगभग ई.पू ३७०–२८३ मा भएको थियो । चाणक्य संसारमै राजनीति र कुटनीतिका महान ज्ञाता मानिन्छन् । उनले अर्थशास्त्र , राजनीति, आर्थनिती , कृषि , समाजनीति जस्ता कयौ महान ग्रन्थहरु रचना समेत गरेका छन् । उनको अर्थशास्त्रलाई मौर्यकालिन समाजको दर्पण समेत मानिदै आएको…विस्तृत समाचार »
प्रचण्डलाई एकपटक फेरि विश्वास किन नगर्ने ?
केशबराज जोशी/टिप्पणी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर विरोधीहरुले प्रचण्डमाथीको प्रहार रोकेका छैनन् । यो सत्य हो प्रचण्ड युद्धमैदानमा जन्मीएका एक नेता हुन र उनका व्यवहार र शैली अरुभन्दा केही फरक छन् । माओवादीले रोजेको बाटोमा हिड्न लाज नमान्ने तर प्रचण्डलाई स्वीकार गर्दा वागमती नदीमा नुहाएजस्तो हर्कत देखाउने नेपाली राजनीतिको चरित्र आफैमा नराम्रो छ । आफूसंग हुदा महान हुने र आफूबाट…विस्तृत समाचार »